Manome Fialokalofana An’i Julian Assange Mpanorina Ny WikiLeaks i Ekoatera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2012 11:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Svenska, Português, বাংলা, Български, 日本語, English
Taorian'ny fiandrasana ela, nanambara i Ekoatera fa hanome fialofana ara-politika an'i Julian Assange mpanorina ny WikiLeaks. Ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny Ekoateriana, Ricardo Patiño, no nanao ilay fanambarana tamin'ny 7 ora maraina, ora ao Ekoatera, 1 ora tolakandro any Londona, tamin'ny 16 Aogositra 2012. Araka ny hazavain'ny Justice for Assange (Ny Rariny Ho An'i Assange):
James Albury (@alburyj), olon-tsotra mpampahalala vaovao, dia nanao fampitàna mivantana avy eo ivelan'ny Masoivohon'i Ekoatera ao Londona.
Ny kaonty Twitter Justice for Assange (@swedenvsassange) nanoratra hoe :
@swedenvsassange: Nandray fanapahan-kevitra ny firenena Ameriana Latina iray ahitàna mponina 13 tapitrisa fa hiaro ny zon'ny olona manerana izao tontolo izao hahafantatra. #assange.
Avy hatrany dia naneho hevitra momba ilay fanambaràna ny Birao Britanika misahana ny Raharaham-Bahiny sy ny Tany mampiasa na miteny Anglisy “Commonwealth” (@foreignoffice) :
@foreignoffice: Tohina izahay amin'ny fanambaràna nataon'ny Ministry ny Raharaham-Bahiny Ekoateriana hoe hanome fialofana politika ho an'i Julian#Assange i #Ecuador.
@foreignoffice: Araka ny lalàna eto aminay, rehefa tapitra ny làlana rehetra azon'Ing Assange hanaovany fampakàrana ny didy, dia teren'ny lalàna ny manampahefana eto Angletera hamerina azy ho any Soeda
@foreignoffice: Hotanterahanay izany andraikitra izany. Tsy hanova an'izany ny fanapahan-kevitra noraisin'ny governemanta Ekaoteriana tamin'ity tolakandro ity. #Assange
@foreignoffice: Vonona hifampiraharaha hitady vahaolana hahafahanay manatanteraka izay famerenana azy araka ny Lalàna Fandroahana izay izahay.#Assange
Ho valin'ireny bitsika ireny, WikiLeaks (@wikileaks) nanoratra hoe :
@wikileaks: Resaka fotsiny izany raha ny marina. Voaterin'ny lalàna hanaiky ilay fialokalofana, ny zon'ireo mpitsoa-ponenana ary ireo fifanekena hafa nataony tamin'ny Firenena Mikambana i Angletera.
Ireo mpikirakira aterineto avy ao Ekoatera sy ny rehetra avy amin'izao tontolo izao dia samy niresaka ilay olana avokoa hatramin'ny omaly, 15 Aogositra, rehefa naharay taratasy iray avy amin'i Angletera i Ekoatera. Patiño nilaza tamin'ny Alarobia, araka ny tatitry ny BBC: “Androany izahay dia naharay fandrahonana mivantana avy amin'i Angletera, voasoratra an-taratasy, fa mety hanafika ny masoivohonay ao Londona ry zareo raha tsy atolotray i Julian Assange.” WikiLeaks dia namoaka fanambaràna iray momba io fandrahonana io, manipika fa :
Taorian'ny nipoahan'ny vaovao momba io taratasy io, Jacob Appelbaum (@ioerror) dia niantso ny vahoakan'i Londona hanohana an'i Assange.:
@ioerror: Eto Londona ve ianao? Mandehana mamonjy ny masoivoho Ekoateriana hanohana an'i Julian Assange,#wikileaks ary ny zon'ireo mpangataka fialokalofana na aiza na aiza!
Mandritra izany, Josh Shahryar (@JShahryar), mpiaro zon'olombelona sady mpanoratra sy mpandalina ny politika iraisam-pirenena dia nibitsika hoe :
@JShahryar: Tsy matimaty amin'i Julian #Assange , saingy ny fandrahonan'ny Britanika hanafika ny masoivoho Ekoateriana ao Londona dia zava-mahamenatra sy maharikoriko tsy hay lazaina.
Taorian'ny nanambaràn'i Ekoatera fa mety hanome fialokalofana ho an'i Assange izy, @robertito1991 [es], mpampiasa Twitter avy Guayaquil, Ekoatera, nanoratra hoe :
@robertito1991 [es]: Ekoatera no ilay firenena malaza eto ambonin'ny tany tamin'ny fanomezana an'i Etazonia sy Angletera ny sasany amin'ireo fanafodiny #AsiloAssange @LegionJJ @anonopshispano
Saingy tsy ny Ekoateriana rehetra no faly tamin'ilay vaovao, ka ny sasany nampahatsiahy ny fifandraisana mafampàna eo amin'ny mpampahalala vaovao sy ny Filoha Rafael Correa, toa an'i @GiannyMoc [es] sy Fer Cascante (@FerCascante) [es] :
@FerCascante [es]: Andriamanitra o! fa firenena inona re ity iainantsika ity e? Manome fialokalofana ry zareo ho an'i Assange #AsiloAssange fa tsy hajain-dry zareo kosa ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, fifanoheran-javatra re izany!
Ny hafa, toa an'i Elías Suárez (@Slashzer) [es], dia velom-panahiana :
@Slashzer [es]: Mitady izay zavatra fantatr'i Assange i Correa, tsy isalasalàna ny amin'izay.
Nefa ny hafa mankalaza sy miarahaba ny governemanta Ekoateriana, toa an'i David Jimenez Abad (@DavidJimenezA93) [es], avy ao Cuenca, Ekoatera :
@DavidJimenezA93 [es]: Tsara ny nanomezan'i Ekoatera filaokalofana an'ì Assange #AsiloAssange sy tsy nileferany tamin'ny tsindry iraisam-pirenena.
Araka izay nanipihan'ilay mpikaroka momba ny fandriampahalemana azy, Dillan Beresford (@d1n), dia tsy mbola tapitra akory ny tantara :
@d1n: Tsy mbola tapitra izy ity. Fialokalofana politika *tokony* saingy tsy hiantoka fikisahana ieren-doza ho an'i Julian Assange ho any Ekoatera.
Vao haingana, nitatitra ny fandrakofam-baovao nataon'ny The Guardian fa hoe “nampiantso ny masoivohon'i Ekoatera ao Stockholm i Soeda, nilazany fa zavatra “tsy azo ekena” ny fanomezana fialokalofana politika ho an'i Assange.